Fayruska Corona oo go'doon iyo heegan sarre geliyey xerada Xalane
Shaqaale ka tirsan xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa mar sii horeysay qaadey caabuqaas safmarka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo mas'uul ka ah ammaanka xerada Xalane oo fariisin u ah safaaradaha shisheeye iyo diblumaasiyiinta, ayaa joojiyey dhaqadhaqaaqii xerada.
War-saxaafadeed kasoo baxay howlgalka oo nuqul kamid ah uu arkay Garowe Online ayaa lagu sheegay in go'aanka uu dhaqan-galayo laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 29-ka Maaj, sanadka 2020.
Bayaanka ayaa lagu caddeeyay in go'aankaas uu la xiriiro ka hortagga faafitaanka fayruska faraha ba'an ku haya aduunka ee Coronavirus.
Go'aankaas ayaa lagu wargeliyey safaaradaha, xafiiska Qaramada Midoobay iyo qandaraasleyaasha xiriirka la leh Dowladda Soomaaliya.
"Sikastaba, adeeg-bixiyeyaasha laga maarmaanka ah, iyaddoo loo eegayo hadba sidda ay xaaladu tahay, waxaa loogu ogolaan doonaa in ay galaan sadhiga shuruudo cayiman," ayaa lagu yiri warqadda.
Talaabadaas ayaa timid xili Jimcadii la xaqiijiyey in shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobay laga helay Covid-19 markii uu soo maray wadamo uu cagta mariyey caabuqaas dunida ku dilay 30-kun oo ruux.
UNSOM ayaa sheegtay in ay bukaanka oo si gaar ah loo karan-tiilay la waydiinayo su'aallo la xiriira suurtalganimada hadii ay jiraan dad kale oo uu la kulmay.
Wasaarada Caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in kiisaska cudurka ee laga helay gudaha waddanka ay haatan marayaan saddex isla markaana dadka laga baarayo ay tobanaan gaarayaan.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa shaacisay in ruuxaan uu ka tirsan yahay howlwadeenada xerada Xalane.
Puntland oo digniin u dirtay bukaanada laga helay fayruska Corona
Puntland 08.05.2020. 01:50